Photo | Ilmo yar oo laga tallaalayo dabeysha/Sawir/Keyd/Cabdiraxmaan Xaaji
27 November, 2013 BAY
75,OOO oo carruur ah oo gobolka Bay laga tallaalay cudurka dabeysha
Ololaha tallaalka cudurka dabeysha ayaa si habsami leh uga socda deegaanno ka titsan gobolka Bay, Iyadoo magaalada xarunta u ah gobolka ee Baydhabana ay ka mid tahay meelihii laga helay cudurka dabeysha.
Degmooyinka ay ka midka yihiin Qansax-dheere, Buur-hakaba, Bardaale iyo magaalada Baydhabo ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ka socdey olole lagu wacyi gelinayo dadka ku dhaqan degmooyinkaas inay is tallaalaan isla markaana carruurtooda ay tallaalaan.
Macallin Cali oo ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada Baydhabo ayaa sheegay iney si wacan ula socdaan warbixinnada shaqaalaha caafimaadka ee ku saabsan halista cudurka dabeysha, isla markaana uu qaatay talooyinkooda uuna tallaalay carruurtiisoo dhan.
“Mar haddii uu carruurta haleelo waxba lagama qaban karo, balse maaddaama uu ka hortag leeyahay ayaan carruurteyda tallaalay, mana uga baqayo inay iga naafoobaan.” Ayuu yiri Macallin Cali.
Waxaa jira dad ka imaanaya tuulooyinka aan tallaalku gaarin oo carruurtooda, kaidb markii ay soo fahmeen faa`iidada uu leeyahay amaba ay arkeen khatarta uu carruurta ku yahay. Maxamed Sheikh Cali wuxuu la kulmay wiil yar oo ay qaraabo yihiin oo baaddiyaha degmada Qansax-dheere ku naafoobay, loogana shakiyay inuu haleeyay cudurka dabeysha, kaddibna inta gaari kusoo qaaday ula soo cararay dhanka magaalada Baydhabo, si wax looga qabto.
“Wiilka yar wuxuu naafo ka noqday gacan iyo lug, WHO ayaa saxaro ka qaadday sidaa ayaa lagu ogaaday inay dabeysha haleeshay wiilkaas” Ayuu yiri Maxamed.
Maxamed ayaa sheegay inuu sidoo kale maqlay carruur loo maleynayo inay dabeysha naafeysay, balse dadka baadiyaha jooga badankooda ay ku adagtahay inay carruurtooda tallaal ugu soo qaadaan magaalooyinka iyo degmooyinka uu ka socdo ololaha.
“Intii aan joogay tuulooyinka aan ka keenay wiilkaas waxaa la ii sheegay in wiilal kale ay jiraan oo lugaha iyo gacamaha beeley, dadkiina waa kuwo reer miyi ah, aqoon uma lahan waxaas carruurta saas yeelayo, sababtoo ah tallaalka ma gaaro tuulooyinka fog fog”.
Sarkaal ka tirsan qeybta kormeerka tallaalka gobolka Bay ee hay`adda caafimaadka QM WHO oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in tan iyo intii tallaalka laga bilaabay gobolka Bay lagu tallaalay carruur ka badan 75,000 magaalooyinka Baydhabo, Buurhakaba, Qansaxdheere iyo Berdaale, balse aan sababo ammaan iyo waddooyinka oo roobab ay jareen dartood loo gaari waayay deegaannada kale ee gobolkaas.
Muxyadiin Xasan Maxamed/FM /MRS